रामकुमारीलाई ओलीको प्रश्न : बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? – Butwal 24 News
रामकुमारीलाई ओलीको प्रश्न : बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?
September 6, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on रामकुमारीलाई ओलीको प्रश्न : बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?
२१ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको मौनताबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले एमसीसीको विरोध तथा भारतीय प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहनको विषयमा जारी गरेको वक्तव्यलाई लिएर ओलीले प्रश्न उठाएका हुन् ।रामकुमारीको नाम नलिई एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘जो मन्त्री हुन खुट्टा उचालेर बसेका छन्, तिनै मान्छेहरु हिजो ज्याकेट दर्शकतिर फुत्त फ्याँकेर, मास्क स्टाइलिस पाराले फुत्त खोलेर, आफैंले टाँसेको टेप फिल्मी स्टाइलमा निकालेर बोल्न पाइन्छ भन्थे । म अहिले सोध्न चाहन्छु तिनीहरु र तिनीहरुको सरकारलाई, बोल्न पाइन्छ कि पाइदैन नेपालमा ? देशबारे बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? राष्ट्रियताबारे बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?’
त्यसको भोलिपल्ट उनीलाई पक्राउ समेत गरिएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अधिनायकवाद भयो, बोल्न पाइन्छ भन्नेहरुको सरकारले बोलेमा कारबाही गर्छु भन्न थालेको बताए । तर हिजो बोल्न पाइन्छ भन्नेहरु अहिले चुइक्क नबोलेको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन् ।
भुलचुकले कपाल फुल्याे, म आफूलाई युवा नै ठान्छु : केपी ओली
एमसीसीले पठायो नेपाल सरकारलाई जवाफ
काठमाडौं उपत्यकामा भोलि देखि नयाँ नियम लागु हुँदै
एमसीसीबारे ओलीको यु टर्न, मुलुकको हितमा छैन
September 8, 2021 September 8, 2021 Butwal 24 News